YENZA IKHAYA LAKHO LIBE ELAMA-MUSLIM
Ikhaya lama-Muslim yilelo imithandazo emihlanu yenziwa kulo (Ngabesimame, abesilisa beya e-Masjid). Lapho kwenziwa ngisho nama-Nafl Salaah (ama-Sunnah), kufundwe neQur'aan, ama-Dhikr, ama-Dua ngokudlinza, kanye ne-Ta'leem (lapho kufundwa khona izincwajana ezivuselala ukholo). Kanti nezimilo ezinhle ze-Islam zibonakala kubo bonke abahlali bakulelikhaya, kanjalo nendlela yokuziphatha, nobulungiswa obuhambelana ne-Islam buyabonakala.
Uma kukhona umuntu oyi-Aalim, u-Moulana noma u-Sheikh kulelikhaya, kumele kusetshenziswe amathuba okuba kufundwe izincazelo ze-Quraan, nama-Hadith (izisho zoMphrofethi). Uma kune Haafidh noma i-Qaari kumele kusetshenziswe amathuba ezifundo ze-Tajweed. Ngalendlela ikhaya lama-Muslim lingaphenduka libe yikhaya elibusisekile nokufundelwa kulo nge-Islam.
Ngokwenza ikhaya lakho libe elokufundela kulo, izibusiso kanye noMusa ka-Allah wehlela phezu kwalelikhaya, kube nokuthula nokuhloniphana emagatsheni omndeni. Okumele sikwazi kahle wukuthi, Ingcebo nemali ngeke igcine ngokwenela, kodwa kuyoba khona nemfalakahlana ngaphezulu, okusho ukuthi kuyokuba nezibusiso ngisho nasemalini onayo, Siyobe sesiphepha ezifweni, ezingozini, ezinkingeni ezinhlobonhlobo, njll njll. Impilo ephephile nebushelelezi iyoba yisiqiniseko kuwo wonke umuntu.